YouTube မှာ AI အကြောင်း ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးမယ့် Iron Man
16 May 2018 . 4:36 PM
Marvel Superhero ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ Iron Man အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ Robert Downey Jr. (RDJ) ကို လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ Iron Man ရဲ့ Jarvis AI က Iron Man ရုပ်ရှင်တွေ စထွက်ထဲက ဥာဏ်ရည်တု Artificial Intelligence အကြောင်းကို စတင်ပြီးတော့ လူတွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Iron Man နဲ့ Marvel Superhero မှာတင်မဟုတ်ပဲ Robert Downey Jr. က အခုအချိန်မှာ AI အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဇတ်လမ်းတွဲတစ်ခုရိုက်ကူးသွားတော့မယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အခု ဇာတ်လမ်းတွဲကို RDJ ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Suan Downey Jr. ကနေ Producer အဖြစ်တာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Documentary ပုံစံမျိုး ဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ YouTube Red ကနေ ပြသသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
YouTube Red ဆိုတာကတော့ လက်ရှိ YouTube ရဲ့ Premium Subscription Service တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Netflix နဲ့ အဓိကယှဉ်ပြိုင်နေရတဲ့ Streaming Service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ RDJ အနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လူကြည့်ပိုများတဲ့ Netflix အစား YouTube Red ကို ရွေးချယ်သလဲဆိုတာကတော့ အတိအကျမပြောသွားပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအတိုင်းဆိုရင် Netflix နဲ့ YouTube Red တို့က ယှဉ်ပြိုင်မှုပိုပြင်းလာမယ့်သဘောမှာ ရှိပါတယ်။
အခု RDJ ကရိုက်ကူးသွားမယ့် AI Series ဟာ ကြာမြင့်ချိန် ၁ နာရီခန့်ရှိတဲ့ အပိုင်း ၈ ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ပြသသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ AI ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ လူပြောအများဆုံးစကားလုံးတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ Susan Downey Jr. ကတော့ အခုလိုမျိုး ရူပ်ထွေးပြီး နက်နဲလှတဲ့ AI အကြောင်းအရာတွေကို ဖျော်ဖြေရေးပုံစံနဲ့ အကောင်းဆုံးတင်ဆက်သွားမယ်လို့ ကတိပေးသွားပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Avengers : Infinity War အပြီးမှာ RDJ ကို နောက်နှစ်မှာ AI Series တစ်ခုမှာ တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။
Ref : Forbes
Marvel Superhero ရုပျရှငျကားတှမှော Iron Man အနနေဲ့ သရုပျဆောငျတဲ့ Robert Downey Jr. (RDJ) ကို လူတိုငျးသိကွမှာပါ။ Iron Man ရဲ့ Jarvis AI က Iron Man ရုပျရှငျတှေ စထှကျထဲက ဉာဏျရညျတု Artificial Intelligence အကွောငျးကို စတငျပွီးတော့ လူတှကေို မိတျဆကျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Iron Man နဲ့ Marvel Superhero မှာတငျမဟုတျပဲ Robert Downey Jr. က အခုအခြိနျမှာ AI အကွောငျးနဲ့ ပတျသတျပွီး ဇတျလမျးတှဲတဈခုရိုကျကူးသှားတော့မယျလို့ ကွညောလိုကျပါတယျ။ အခု ဇာတျလမျးတှဲကို RDJ ရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ Suan Downey Jr. ကနေ Producer အဖွဈတာဝနျယူသှားမှာဖွဈပွီးတော့ Documentary ပုံစံမြိုး ဖွဈလာမယျလို့သိရပါတယျ။ ထူးခွားခကျြတဈခုကတော့ YouTube Red ကနေ ပွသသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
YouTube Red ဆိုတာကတော့ လကျရှိ YouTube ရဲ့ Premium Subscription Service တဈခုဖွဈပွီးတော့ Netflix နဲ့ အဓိကယှဉျပွိုငျနရေတဲ့ Streaming Service တဈခုဖွဈပါတယျ။ RDJ အနနေဲ့ ဘာဖွဈလို့ လူကွညျ့ပိုမြားတဲ့ Netflix အစား YouTube Red ကို ရှေးခယျြသလဲဆိုတာကတော့ အတိအကမြပွောသှားပမေယျ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဒီအတိုငျးဆိုရငျ Netflix နဲ့ YouTube Red တို့က ယှဉျပွိုငျမှုပိုပွငျးလာမယျ့သဘောမှာ ရှိပါတယျ။
အခု RDJ ကရိုကျကူးသှားမယျ့ AI Series ဟာ ကွာမွငျ့ခြိနျ ၁ နာရီခနျ့ရှိတဲ့ အပိုငျး ၈ ပိုငျးပါဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ လာမယျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ ပွသသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ AI ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ နညျးပညာနယျပယျမှာ လူပွောအမြားဆုံးစကားလုံးတဈခုဖွဈနပွေီးတော့ Susan Downey Jr. ကတော့ အခုလိုမြိုး ရူပျထှေးပွီး နကျနဲလှတဲ့ AI အကွောငျးအရာတှကေို ဖြျောဖွရေေးပုံစံနဲ့ အကောငျးဆုံးတငျဆကျသှားမယျလို့ ကတိပေးသှားပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ Avengers : Infinity War အပွီးမှာ RDJ ကို နောကျနှဈမှာ AI Series တဈခုမှာ တှမွေ့ငျရတော့မှာပါ။
Mia Khalifa ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဘောလုံးသမားတွေက ဘယ်သူတွေများလဲ
စာချုပ်သစ်ချုပ်ပြီးရင် ပရီးမီးယားလိဂ် လစာငွေအများဆုံးစာရင်းမှာ David De Gea ဘယ်နေရာရောက်မလဲ
by PhoneHayKo .6hours ago
ကောင်းကင်ထက်မှာ လွင့်ပျံနေမယ့် ကြော်ငြာတွေကို မကြာခင်တွေ့ရတော့မှာလား
by Min Than Htike .7hours ago
၂၀၁၈ ခုနစ်က နာမည်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Diet Trend များစုစည်းမှု
by Htet Htet .7hours ago
ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် Clean Sheets အများဆုံးရရှိထားကြတဲ့ ဂိုးသမားများ
ဘားအံမြို့မှာ 4G+ Wireless Broadband ဝန်ဆောင်မှုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား